Anya mụ na-ahụ ọnwa mana apụghị mụ ịkpatụ ya ụkwa na aka.
Anya mụ ahụla kpụkpa ndọ buru ibu n’elu igwe, ma na apụghị mụ ịgụ ha ọnụ nke mụ ji ama ole ha dị.
Mmụọ mụ nọ n’Ala Igbo ugbu a mana ahụ mụ nọ na ala bekee.
Tupu mụ enwe ike zọrue ụkwụ mụ n’Ala Igbo, aga mụ agba ụgbọ elu ga-ebuga mụ ebe ahụ.
Igwe eji ekwu okwu ga akpọ onye nọ n’Ala Igbo ọ za na-agbanyeghị na ntị ha nọ na ebe tere anya.
Ụda egbe mmiri na-eru mụ ntị, mana aka mụ apụghị imetụ ya, nke anya mụ ji ahụ ya.
Ana mụ anụ ushi ahụ, mana apụghị mụ iji anya mụ hụ ya.
Ana mụ arọ nrọ mana apụghị mụ ịkwụsị ọtụtụ ihe mụ na-eme na nrọ.
Agụ na-agụ mụ, mana apụghị mụ ịsị ya kwụsị ma ọ bụghị na mụ nyere onwe mụ ihe oriri.
Ikuku na-eku mana ahụ mụ amaghị ma ọ na-ekpo ọkụ ma ọ na-ajụ oyi, mana anya mụ apụghị ịhụ ya bụ ikuku anya.
Ire mụ ga-amata ma nnu, suga, mmanụ aṅụ, ma ọ bụ olugbu ọ dị n’ihe oriri ọbụla anya apụghị ịhụ.
Ụwa nkea dị kwa egwu!